NORWAY: Maal-qabeen xaaskiisa dilay oo muddo 2 sano ku dhow sirayay booliska oo la xiray - Calanka.com
Booliska dalka Norway waxaa ay shalay gelinkii hore ay xabsiga dhigeen nin maalqabeen ahaa kaa soo muddo labo sano ka hor xaaskiisa la waayay, uuna intaasi sirayay booliska islamarkaana uu jah-wareerinayay.
Ninkan oo lagu magacaabo Tom Hagen islamarkaana deggan xaafadda Fjellhamar ee duleedka magaalada Oslo ayaa waxaa xaaskiisa ka waayay guriga 31. oktober 2018, waxaana uu ku wargeliyay booliska, isagoona u sheegay in uu xaaskiisa Anne-Elisabeth Hagen uu ka waayay guriga islamarkaana uu miiska ugu yimid warqad hanjabaad iyo madax-furasho lagu dalbanayo.
Wargelintaasi kadib waxaa ay boolisku rumeysteen sheegashada ninkan, iyagoona kiiskaasi u baarayay in muddo ah qaab “qafaalasho” ayna ku jahwareereen intii ay baaritaanka ku jireen.
Warqadda uu gurigiisa ka dhex helay ninkan ayaa waxaa ku qornaa in ay doonayaan lacag madax-furasho ah oo sagaal milyan oo euro ah, oo waliba lacag caadi ah aan aheyn balse tan loo yaqaan Bitcoin ee internetka looga kala ganacsado.
Ninkan oo intii ay boolisku baaritaanka wadeen la shaqeynayay ayaa marba jiho khaldan u tilmaamayay booliska si uu u jahwareeriyo, isagoona xitaa qeyb ka mid ah lacagta la dalbaday oo gaareysay in la badan hal milyan iyo bar euro ah ay boolisku ku wargeliyeen in uu u xawilo nimanka xaaskiisa qafaashay si ay u tixraacaan, balse waxa uu ku shubtay lacagtaasi account qarsoon oo uu isaga ka dhex sameystay internet-ka islamarkaani aan cidi tixraaci karin kaligiis mooyee.
Tom iyo xaaskiila Anne-Elisabeth
Intii uu baaritaanka socday waxa ay dhowr jeer isku dheceen ninkani booliska, oo uu muddo kadib ku wargeliyay in aysan dhageysan karin taleefankiisa wixii iminka laga bilaabo oo uu u baahn yahay nolol u gaar ah.
Booliska oo shaki ku abuurtay isku-dhacyadaasi iyo xal-ka-gaarid la`aanta raadadka kiiskan ayaa waxaa ay ogolaasho kasoo qaateen xeer-ilaalinta dalkaasi si ay mikrofoono qarsoon iyo waliba muuqaal duubayaan uusan ka warqabin ninkan ay ku xirtaan gudaha gurigiisa islamarkaana ay bilooyin dhageysanayeen ama daawanayeen.
Tallaabadan ayaa booliska u sahashay in ay xogo dheeraad ah ka helaan kiiska, waxaana ay ugu dambeyn iskuweer ka qabteen ninkan xilli uu shaqo u socday shalay abaarihii sagaalka subaxnimo ayna xabsiga u taxaabeen.
Waxaa ay booliski ku eedeynayaan iminka in uu wax ka ogyahay amaba uu isaga dilay xaaskiisa.
Waxaa sidoo kale lagu eedeynayaan in uu booliska siray ama marin-habaabinayay intii ay baarisku socotay.
Maxaad ka fili kartaa lammaane da`ah oo cudurka coronavirus kala geeyay?